Su'aalaha La Weydiiyo - Hebei King Flaal Flange Oo Rakibidda Manufacturing Co., Ltd.
Qalabka tuubbada birta ah ee la awoodi karo
Qalabka kaarboonka birta ah
Qiimaheena waa isbadali karaan iyadoo kuxiran sahayda iyo sababaha kale ee suuqa. Waxaan kuu soo diri doonnaa liis qiimeyn casriyeysan ka dib shirkaddaada nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Ma haysaa tiro dalab ugu yar?
Haa, waxaan ubaahanahay dhamaan amarrada caalamiga ah inay lahaadaan tirada dalabka ugu yar ee socda. Haddii aad raadineyso inaad dib u iibiso laakiin tiro aad u yar, waxaan kugula talineynaa inaad hubiso degelkeenna
Shaybaarrada, waqtiga hoggaamintu waa ilaa 7 maalmood. Soosaarka ballaaran, waqtiga hogaamintu waa 20-30 maalmood kadib helitaanka lacagta deebaajiga. Waqtiyada hogaamintu waxay dhaqan galayaan markii (1) aan helnay deebaajigaagii, iyo (2) aan helno ogolaanshahaagii ugu dambeeyay ee alaabadaada. Haddii waqtiyadayada hogaamintu aysan la shaqeynin waqtigaaga ugu dambeeya, fadlan ka gudub shuruudahaaga iibkaaga. Xaaladaha oo dhan waxaan isku dayi doonnaa inaan la jaanqaadno baahiyahaaga. Xaaladaha badankood waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.
Noocee ah hababka lacag bixinta ee aad aqbasho?
30% deebaaji ah kahor, 70% dheelitir ka dhan ah nuqulka B / L.
Haa, waxaan had iyo jeer isticmaalnaa baakadaha dhoofinta oo tayo sare leh. Waxaan sidoo kale u adeegsannaa xirxirida halista khaaska ah alaabooyinka halista ah iyo xaqiijinta rakibayaasha qaboojinta alaabada xasaasiga ah Baakadaha takhasuska leh iyo shuruudaha xirxirida aan caadiga ahayn ayaa laga yaabaa inay qaadaan lacag dheeraad ah.
Sidee ku saabsan khidmadaha rarka?
Qiimaha dhoofintu waxay kuxirantahay habka aad dooratay inaad alaabta ku hesho. Express waa sida ugu dhaqsaha badan laakiin sidoo kale habka ugu qaalisan. Xeerarka badda waa xalka ugu fiican ee qaddarka badan. Si sax ah sicirka xamuulka waxaan ku siin karnaa oo keliya haddii aan ogaanno faahfaahinta xaddiga, miisaanka iyo habka. Fadlan nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
CAGAARANTA BOQORADDA HEBEI IYO QALABKA SOO SAARKA CO., LTD